Aynu yara qosolno! | KONGOLISOLO
Waajibka xusuusta: maxaa ku guuleystey, Luis Moreno Ocampo cirka 7aad ee ka hor yimid Angelina Jolie? Mid ka mid ah afartaan subaxnimo, qareenka hore ee maxkamada dambiyada caalamiga ah (ICC) Luis Moreno Ocampo iyo Angelina Jolie ayaa ku kulmay sheekeysi
Posted By: KongoLisolowaa: July 21, 2020 10: 10 No Comments
Mid ayaa rumaysan lahaa; Muuqaal laga soo qaaday sagxad dhab ah. Ninkii Moreno Ocampo si muuqata ayuu u arkaa, sida haddii uu sixir u adeego gobalkiisii, isagoo u kaxeeyay xagga 7aad ee jannada. Maxaa…	Akhri wax dheeraad ah